Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga eyakhiwe ngamaplanga eyakhiwe ngamaplanga eyi - I-Airbnb
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga eyakhiwe ngamaplanga eyakhiwe ngamaplanga eyi
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguAby
Le ndawo ikwiikhilomitha eziyi-3 ukusuka kwibhulorho endala ye-pambanar kwi-NH 183. Inqaba kangangemitha eziyi-3730 ngaphezu kolwandle, le ndawo yindalo ehambelanayo ejikelezwe yeti kunye nesityalo sekhadi. Kude nabantu abaninzi le ndawo ithe cwaka kakhulu ngaphandle kweengoma zeentaka neentaka zamahlathi. Ukuba unethamsanqa usenokubona nezinye izimuncumuncu. Le yindawo efanelekileyo kwabo bafuna ukuphumla/ ukucamngca/njengohambo lomtshato/ukuvuselela ingqondo yakho.
Indawo yokuhlala inezindlu ezinendawo yokuphola ezimbini ezinokwamkela iintsapho ezimbini (abantu abasibhozo) kunye negumbi elahlukileyo elineebhedi ezimbini ezilala umntu omnye elinokuhlala abantu ababini. Ixabiso lelendlu nganye enendawo yokuphola. Abo bangafuni ukupheka ukutya siza kuzinika zona ngeendleko ezongezelelweyo. Sinikezela ngeentente kwabo bakhetha ukulala kufutshane nendalo. Izakhiwo zethu zibiyelwe. Abo bakhetha ukupheka ukutya sinekhitshi elinento yonke kwipomakazi ngalinye. Indlu nganye enendawo yokuphola ine-dstv kunye neWiFi yasimahla. Sineebhayisekile zasezintabeni kwabo bathanda ukuhamba kwasekuseni kwilizwe elijikeleze ifama yeti embi. I-villa inendawo yokutshixa enenombolo etshintshatshintshayo yokutshixa ukuze ukhuseleke ngakumbi. Sishiye nendawo yemithwalo. Singakwazi nokulungiselela ukuthutha ukuya nokubuya kwizibuko lomoya/isikhululo sikaloliwe okanye izikhululo zebhasi simahla. Njengeholide sivakalelwa kukuba yindawo entle onokuya kuyo ngaphandle kweengxaki zabantu. I-Luxuriously emiselwe ukuba ibe yindawo yokwamkela iindwendwe, le yindawo yokuhlala ye-boutique ebalungele abantu, abantu abathandanayo okanye iintsapho ezincinci ezikhangela indawo yokuphola kwilizwe elenzelwe wena zidibene nabantu abakhenkethisayo abaneephakheji ezibalaseleyo zokukhenketha ezidibanisa ukuhamba ngesikhephe kunye namaziko adumileyo e-Ayurvedic okuphulula izihlunu kunye nokuphathwa
Idolophu ekufutshane ikude ngeekhilomitha eziyi-5. I-Paruthumpara okanye i-E Eagle Rock ikwiikhilomitha eziyi-10 kuphela kwaye yindawo yokunyuka intaba. I-Peermade ekwikhilomitha eziyi-10 ukusuka kwisikhululo esincinci seenduli.
I-Panchalimedu esinye isikhululo seenduli sikude ngeekhilomitha eziyi-20. Le ndawo ingqongwe ziinduli ezinomtsalane. Ikude ngeekhilomitha eziyi-32 yindawo yePaki Yelizwe ye-periyar. Liyikhaya leendlovu, ii-tigers, i-gaur njl njl.
Umbuki zindwendwe ngu- Aby
iyafumaneka 24x7. Isoloko kukho umntu okhathalela abahlali.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Idukki